Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem mbụ gị na Europe, enwere ihe ole na ole ị kwesịrị ịma maka kachasị mara mma n'obodo n'ụwa. anyị mere atụmatụ zuru oke maka 10 emehie njem ị kwesịrị izere na Europe. A njem na ala nke castles, nri mara mma, ogige mba, na ime obodo, nwere ike ịbụ otu n'ime ezumike kachasị echefu ị ga-enwe. Na ntụle, o nwekwara ike gbanwee na akụkọ ojoo ma nwee ngwụcha ọjọọ, ma ọ bụrụ na ị kwadoghị nke ọma.
Ọ bụrụ na ọ bụ njem mbụ gị na Europe, mgbe ahu i ghaghi iga ebe ndi obula na ekwu. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta Europe pụrụ iche, mgbe ahụ ịghara ịga obere obodo nta na obodo ndị a ma ama bụ otu n'ime mmejọ njem ndị a na-eme iji zere na Europe. Should kwesịrị ị na-eme atụmatụ njem gị na-agaghị echefu echefu kwụsịrị amia ụzọ ebe na Europe.
Otu n’ime ihe mbụ batara gị n’obi ma ị nụ njem ọha na eze, bọs jupụtara na ụgbọ ala na-ekpo ọkụ, kwụ n'ahịrị, na okporo ụzọ. Otú ọ dị, ụgbọ njem ọha na Europe abụghị naanị bọs ma trams na ụgbọ oloko. Fọdụ ndị njem nleta ga-ahọrọ ịgbazite ụgbọ ala, karịa ịga njem, ma njem ọha na eze na Europe dị ezigbo mma, n'oge, ọnụ ala, ma kwadoro.
Feesgwọ ị ga-akwụ kwụọ ụgwọ ma gbanwee ego ga-efu gị, ya mere ọ kachasị mma ịme nyocha gị n'ịntanetị na eisi mgbanwe. Ọzọkwa, ị nwere ike ịrịọ mgbe niile na nnabata ụlọ nkwari akụ gị, ha ga-enwe obi ụtọ ịkwado isi ego na mpaghara. A na-atụ aro ka ị gbanwee maka njem site n'ọdụ ụgbọ elu, na ego ga-ekpuchi nke mbụ 1-2 ụbọchị nke njem gị.
Ọ bụrụ n ’inyefe nanị oge maka nyocha tupu njem gị, ị ga-emeso onwe gị ahụmịhe nri nri anaghị echefu echefu. E wezụga, na-anwale nri di uto, ị nwere ike ịchekwa ole na ole dimes, kama ịghagharị na ụlọ oriri na ọ firstụ firstụ mbụ. Nnukwu kọfị, achịcha dị iche iche, nri obodo, na efere dị ịtụnanya na ọnụego ọchị, nwere ike ịbụ ihe dị n'akụkụ nkuku.
European obodo mara maka ịbụ pụtara, kamakwa maka Ntụtụ, njegharị ndị njem, na atụmatụ dị iche iche iji duhie ndị njem. Mmiri mmiri njem mmefu ego gi n’etiti njem gị ụbọchị akpa, mma, na kaadị akwụmụgwọ bụ ụzọ kachasị mma iji gaa njem nke ọma ma nwee ọ enjoyụ.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Travel Mejọọ I Kwesịrị izere Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/travel-mistakes-avoid-europe/?lang=ig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#traveleurope	Europetips	Train Travel	Mmehie	traveltips